Inona No Afaka Ataon’i Shina Mba Hanajanonana Ilay “Areti-mifindran’ny” Famonoantena Eny Anvon’ireo Mpiasan’ny Governemanta? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jona 2016 4:27 GMT
Sary avy tamin'i Evan Lavine. CC BY-NC-ND 2.0
Naka aina roa indray ny onjanà famonoantena eny anivon'ireo mpiasan'ny governemanta. Ny 12 Jona, maty namono tena ireo mpiasam-panjakana roa ao amin'ny faritanin'i Guangdong. Liu Xiaohua, sekretera jeneraly lefitry ny governemantan'i Guangdong, nananton-tena samirery tao an-tranony, ary nitsambikina teny amin'ny tetezana kosa ny Lehiben'ny Sekretera Itokian'i Xiao Bibo avy ao amin'ny Distrika Shenzhen Yantian.
Maherin'ny 80 ireo Shinoa mpiasan'ny governemanta no maty tamin'ny famonoantena na maty “tsy tamin'ny fomba natoraly” hatramin'ny taona 2014, ary maro amin'izy ireo no teo ambany fanadihadiana noho ny kolikoly teo am-panaperan'izy ireo ny fiainany. Efa tena henjana ny toe-draharaha ka nisy mihitsy ireo media teo an-toerana sasany nanao io hoe “areti-mifindran'ny” famonoantena.
Notaterin'ny media miaraka amin'ny fanjakana fa nanapitra ny ainy ireo mpiasan'ny governemanta ireo noho ny hamafin'ny asa na rarintsaina. Kanefa, toa misy ifandraisany amin'ilay hetsika fanoherana ny kolikoly ataon'ny governemanta Shinoa amin'izao ilay fahabetsahan'ny famonoantena, mahatonga ireo Shinoa maro hino fa miezaka ny hanajanona ireo fanadihadiana atao aminy amin'ny alàlan'ny famonoan'izy ireo ny tenany ireo mpiasam-panjakana. Raha tokony ho fitserana azy ireo ny ataon'ny vahoaka, jeren'ny olona ho toy ny fanaronana azo atao farany ny kolikoly ihany ny fahafatesan'izy ireo.
Noho izany, tsy mahazatra ny mahita fanamarihana eo ho eo ihany na eso mihitsy, ao amin'ireo fanehoankevitra ao amin'ny Aterineto, mikasika ny vaovaon'ny famonoantenan'ny mpiasam-panjakana, toy ny trangan'ny fahafatesan'i Liu Xiaohua:
Iray no maty ary mpiasam-panjakana an'arivony no miezaka miaina!
Avelao ho any ny lefitra mba hiarovana ny eo ambony, izany no lojikan'ny fahefàna ao amin'ny governemanta.
Maro loatra ireo mpiasam-panjakana, vao maika tsara rehefa betsaka ny mamono tena.
Satria nitombo be tokoa ny isan'ireo famonoantenan'ireo mpiasam-panjakana, niezaka ny hijery ny olana ireo sasany, ary nijery vahaolana.
Mamerina ny fihetsehampo malaza, nandroso hevitra ilay mpamelabelatra vaovao, Yu Shenghai, mba hanitarana ny fahefan'ny hetsika fanoherana ny kolikoly, amin'ny fanovàna ny lalàna Shinoa mikasika ny ady heloka bevava, mba hanome fahefàna ny fitsaràna ho afaka haka ireo volan'ny kolikoly any amin'ireo mpikambana amin'ny fianakavian'ireo mpiasam-panjakana maty:
Nanapitra ny ainy noho ny tahotra ny ankamaroan'ireo mpiasam-panjakana. Hitany hoe ny famonoantena no làlana farany hanaronany ny kolikoly nataony, satria ny olona maty tsy afaka hanontaniana mikasika ny heloka vitany. Izany ihany koa no làlana tsara indrindra hiarovany ny lazany, manafina ny vola azo tamin'ny kolikoly ary miaro ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviany amin'ireo fanadihadiana lalindalina kokoa– ny lojika izany dia ny “manao sorona ny tenany hitondra fahasambarana ho an'ny fianakaviany manontolo”. […] Ankehitriny, samy tsy misy manamora ny fahitàna ny marina amin'ireo famonoantenan'ireo mpiasam-panjakana, na ireo lalàna tsy voasoratra na voasoratra. […] Araka ny Lalàna faha 15 amin'ny lalànan'ny ady heloka bevava, tsy mizaka ny andraikiny amin'ny maha meloka azy ireo voarohirohy amin'ny heloka bevava rehefa maty. Mandrisika ireo mpiasam-panjakana mpanao kolikoly handray ny safidiny io tsy fahabangàn'ny lalàna io.
Satria mitombo hatrany ireo tranganà fahafatesana tsy natoraly eny anivon'ireo mpiasam-panjakana, tokony hasiana fanovàna ny lalàna, amin'izay afaka manohy ny fanadihadiany foana ny mpampihatra lalàna aorian'ny nahafatesan'ny voarohirohy. Tokony hitady fomba hakàna ireo volan'ny kolikoly [ny lalàna], amin'izay tsy misy mahazo tombontsoa amin'ilay famonoantena. Tokony hanena ny isan'ny famonoantena eo amin'ireo mpiasam-panjakana io, ary hampiroso lalindalina kokoa ny hetsika ady amin'ny kolikoly.
Ny tsy hitan'i Yu, anefa, dia natao ivelan'ny zotran'ny fanadihadiana ny heloka bevava ao Shina ny hetsika ady amin'ny kolikoly. Araka ny nosoratan’ ilay mpisolovava zokiolona, Chen Youxi, ny taona 2014, raha nitombo ny tahan'ny famonoantenan'ireo mpiasan'ny governemanta, teo an-tànan'ny Kaomisiona Foibe Fanarahamaso ny Famaizana ny Fitondrantena ny fanadihadiana ny kolikoly tao Shina, sampan'ny Antoko Kaominista Shinoa, izay manana fahefana ny hampihatra ny “Shuanggui,” fizotran'ny famaizana ara-pitondrantena anatiny, atao amin'ireo voarohirohy amin'ny kolikoly eo anivon'ny antoko sy ny governemanta. Satria tantanan'ny antoko ny rafi-pitsaràna Shinoa, vao toriana fotsiny ireo voarohirohy, tonga dia hifandray amin'ny fitsaràn'ny antoko ny fanapahankevitry ny fitsaràna. Tsy misy toerana ho an'ny fitsarana mahaleo tena sy tsy mitanila izany.
Araka ny fanamarihan'i Chen Youxi, nahita ilay resaka ho olan'ny tsy fahaleovantenan'ny fitsaràna sy ny fahambonian'ny lalàna i @jamescao2016. Nanoratra lahatsoratra lava sy mampisaintsaina izy tao amin'ny sehatry ny media sosialy, Weibo:
Tamin'ny voalohany, raha namaky ny fomba nahafatesan'ireo mpiasam-panjakana aho, nifaly tamin'ny nahazo azy ireo aho.
Fa nitombo ihany ireo mpiasam-panjakana [namono tena] tamin'ny fitsambikinana teny amin'ny tranobe, filentehana an-drano, fanantonan-tena, fisotroana pozina… nahatsiaro ho tsy netinety aho.
Amin'ny ankapobeny, miaina tsara noho ireo olon-tsotra ireo mpiasan'ny governemanta amin'ny satany ara-toekarena sy ara-tsosialy.
Nahoana ary izy ireo no mbola misafidy na voatery hanapitra ny ainy?
Na ahoana na ahoana izy ireo fony mbola velona, vao maty izy ireo dia lazaina ho samy niaina rarintsaina avokoa.
Sahala amin'ny hoe karazana voninahitra ny rarintsaina ary lamaody fitondrantena malaza eo anivon'ireo mpiasam-panjakana ny famonoantena.
Niady nandritra ny 67 taona i Shina [hatramin'ny 1949, raha nandresy tamin'ny ady an-trano ny antoko kaominista]. Andian-taranaka telo no nampiainina tamin'ny fotokevitra tain'alika, ary karazana fiarahamonina toy inona no ananantsika ankehitriny?
Foana ny ara-panahy ao anaty ary tsy misy fanajàna ety ivelany.
Toy ny hoe raha tratran'ny fandriky ny làlana tsy ahitàna fivoahana na nofy ratsy, tsy misy fivoahana, tsy misy fifaliana fa tahotra.
Tany aloha, namotika an'i Shina ary namono ireo mpanorina sy manampahaizan'ny firenena ilay lahiantitra [filoha Shinoa teo aloha] Mao [Zedong].
Tamin'izany, nohenjehina sy natao am-ponja ireo mpiasam-panjakana. Fa niharitra ny fanenjehana sy tafavoka velona ny ankamaroany.
Ankehitriny, tsy misy fanenjehan'ny fanjakana, tsy misy fanalàna baràka, tsy misy fampijaliana, tsy misy famitahana, fa mbola manan-tsafidy izy ireo, koa nahoana izy ireo no misafidy ny ho faty?
Manaraka lojika ve izany ? Fanontaniana tokony ho saintsainintsika tsirairay avy izany.
Andraikitry ny governemanta ny miaro ny ain'ny tsirairay, tafiditra amin'izany ny an'ireo mpiasam-panjakana. Raha manao kolikoly, haratsiana na fahotàna ireo mpiasam-panjakana, tokony tsaraina sy sazian'ny lalàna izy ireo.
Tsy tokony ho faty toy izao izy ireo.
Raha manaraka an'ingahy antitra Mao isika, hirotsaka ao anaty fampihorohoroana, herisetra ary hadalàna i Shina.
Tsy tokony avy amin'ireo olompirenena tonga saina ihany ny fangatahana ny demokrasia sy ny fahalalahana, fa avy amin'ny olon-tsotra tsirairay avy, tafiditra amin'izany ireo mpiasa sivily ao amin'ny governemanta sy ireo mpiasam-panjakana. […]
Tokony tazonina ny fahambonian'ny lalàna, ary tokony tantanintsika araka ny fotokevitry ny fifandanjana, ny fahaleovantena, ny demokrasia ary ny fahalalahana, araka ny lalàmpanorenana ny firenena.
Ny rarintsaina tsy voatsabo no antony voalohany amin'ny famonoantena. Azo tsaboina tsara ny rarintsaina ary azo sorohana ny famonoantena. Afaka mahazo fanampiana amin'ny mpanohana azo itokiana aty amin'ny Aterineto misahana ireo olona mitady hamono tena sy ny olan'ny fihetsehampo ianao. Tsidiho ny Befrienders.org mba hahitànao ny laharana fanampiana amin'ny Aterineto ao amin'ny firenenao.